HomeArimaha QoyskaWaa Maxay Sababta Ay Raggu Uga Cabsadaan In Ay Xidhiidh La Sameeyaan Gabadh Xidhiidh Hore Soo Martay?
Ka Tagista Gabadha ee wiilkii ay jeclayd ayaa ah mid aad u adag waxana ay ku keentaa in ay marto wakhti adag oo nolosheeda iyada oo sidoo kale ku keenta dhibaatooyin dareen iyo waliba niyad jabyo badan.
Waxa laga yaabaa in ay gabadhu wakhti aad u dheer ku qaadato in ay illowdo wiilkii ay jeclayd sabab kasta oo ay tahay taas oo keenta dhibaatooyinka ay marto.
Sidoo kale waxa aan arin fudud ahayn in uu wiil xidhiidh la sameeyo gabadh soo martay xidhiidh hore waxana ay inta badan Raggu iska fogeeyaan ama ka cabsadaan in ay xidhiidh la sameeyaan gabadh soo martay jacayl hore iyada oo ay sabab u tahay arimo badan oo kal duwan.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa sababta ay Raggu uga Cabsadaan ama u diidaan in ay xidhiidh la sameeyaan gabadh soo martay xidhiidh hore.
1.In Ayna Dumarku Horay Uga Bogsan Dhaawac Jacaylka:
Waxa ay Raggu si fiican u garanayaan in dumarka xidhiidh hore soo sameeyay in ay wakhti dheer ku qaataan ka soo kabsashada dhaawacii uu soo gaadhsiiyay jacaylka iyo ka tagista gacaliyeheedii hore sidaas darteed Ragga ayaa inta badan iska ilaaliya gabadh soo martay xidhiidh jacayl oo hore.
Inta badan dumarka jacaylku dhaawacay ayaa isku daya in ay si deg-deg ah xidhiidh ula sameeyaan wiil kale si ay isku ilowsiiyaan jacaylkeedii hore laakiin ayna wax jacayl dhab ah u qaban wiilka cusub kaliana doonayso in ay isku ilowsiiso jacaylkeedii hore taas oo dhibaato ku noqonaysa Wiilka ay jacaylka la matalayso sidaas darteed Ragga ayaa arintaas darteed uga fogaada gabadha soo martay xidhiidh jacayl oo hore.
3.In Bar-Bar Dhigt:
Waxa ay dadka wax jeclaaday yidhaahdaan ma jirto wax lala dhigo kacaylka ugu horeeya sidaas darteed gabadha xidhiidhka hore soo samaysay ayaa mar walba is bar-bar dhig ku samaynaysa jacaylka haatan iyo jacaylkeedii hore sidaas darteed marnaba Raggu ma jecela in la bar-bar dhigo mid kale.
Arimaha La Yaabkal Leh Ee Ay Raggu Ku Jeclaadaan Dumarka